Dhageyso Jamciyadda Al-ixsaan Oo Gurmad Caafimaad Ka Sameysay Moqokori. – Bogga Calamada.com
Dhageyso Jamciyadda Al-ixsaan Oo Gurmad Caafimaad Ka Sameysay Moqokori.
Iyadoo dhawaan ciidamada Kufaarta Xabashida Itoobiya gabi ahaan isaga carareen degmada Moqokori oo ka tirsan gobalka Hiiraan waxaa degmadaasi gaaray dhaqaatiir ka socota Jamciyadda Al-ixsaan Al-kheyriyah.
Dhaqaatiirka Jamciyadda ayaa howla caafimaad oo isugu jira baaritaano iyo daawo qeybin lacag la’aan ah u sameeyay bulshada ku dhaqan degmadaasi.
Qaar ka mid ah dadka ku dhaqan degmada Moqokori oo la hadlay Idaacada Islaamiga ah ee Andalus ayaa mahad celinta kowaad u jeediyay Allaah SW waxey sidoo kale dadka degmada u mahadceliyeen dhaqaatiirka jamciyada Al-ixsaan Al-kheyriyah ee usoo gurmaday.
Qaar badan oo ka mid ah bulshada ku dhaqan degmada Moqokori oo qaba xanuuna kala duwan ayaa loo sameeyay baaritaano caafimaad waxaa sidoo kale la siiyay daawooyin tayo leh oo gabi ahaantooda ah lacag la’aan.
Degmada Moqokori oo ka mid ah degmooyinka gobalka Hiiraan ayaa waxaa dhawan la wareegay ciidamada Xarakada Shabaabul Mujaahidiin kadib markii degmadaasi isaga carareen ciidamada Kufaarta Xabashida Itoobiya oo muddo duulaan ku joogay degmadaasi.
Halkan Ka Dhageyso Dadka Degmada Moqokori.